Learn more about who we are, Ungasinxibelelana njani nendlela esiyiqhuba ngayo idatha yabantu kwiNkqubo yethu yabucala.
Imvume yakho isebenza kwezi ndawo zilandelayo: www.papapearsaga.co
Imeko yakho yangoku: No consent given. Lawula imvume yakho.
Zithini iicookies ?
Iikuki ziifayile zombhalo ezincinci ezisetyenziselwa ukugcina iziqwenga ezincinci zolwazi. Iicookies zigcinwa kwifowuni yakho xa iwebhusayithi ilayisha kwisikhangeli sakho. Ezi kuki zisinceda ukuba iwebhusayithi isebenze ngokufanelekileyo, yenza iwebhusayithi ikhuseleke ngakumbi, Nikeza ngamava angcono omsebenzisi, kwaye uqonde indlela esebenza ngayo iwebhusayithi kunye nokuhlalutya oko kusebenza kunye nalapho kufuna ukuphuculwa.
Sisebenzisa njani ikuki? ?
Uninzi lweenkonzo ze-Intanethi, iwebhusayithi yethu isebenzisa ii-cookies umntu wokuqala kunye nomntu wesithathu kwiinjongo ezininzi. Iicookies zomntu wokuqala zifuneka kakhulu ukuba iwebhusayithi isebenze ngendlela eyiyo, kwaye abaqokeleli nayiphi na idatha yakho eyaziwayo.
Iicookies zomntu wesithathu ezisetyenziswa kwiiwebhusayithi zethu zisetyenziswa ikakhulu ukuqonda indlela esebenza ngayo iwebhusayithi, how you interact with our website, keeping our services secure, providing advertisements that are relevant to you, and all in all providing you with a better and improved user experience and help speed up your future interactions with our website.
Marketing: Our website displays advertisements. Ezi kuki zisetyenziselwa ukwenza ukuba iintengiso zethu zibonakale kuwe ukuze zibe nentsingiselo kuwe. Ezi khukhi zisinceda ukuba siqhubeke nokulandela umkhondo wempembelelo zentengiso.
Ulwazi olugcinwe kwezi kuki lungasetyenziswa ngababoneleli-ntengiso beqela lesithathu ukukubonisa iintengiso kwezinye iwebhusayithi kwibrawuza..
Iyasebenza: Ezi ziqwengana ezinceda izinto ezithile ezingabalulekanga kwiwebhusayithi yethu. Ezi zinto zisebenzayo zibandakanya ukusasazwa komxholo onjengeevidiyo okanye ukwabelana ngomxholo kwiwebhusayithi kumaqonga eendaba ezentlalo.
Ukukhetha: Ezi kuki zisinceda sigcine iisetingi zakho kunye nokukhangela njengokukhetha ulwimi ukuze ube namava angcono kwaye afanelekileyo kutyelelo elizayo kwiwebhusayithi..
Ndingalulawula njani ukhetho lwekuki ?
Ukuba uthatha isigqibo sokutshintsha ukhetho lwakho emva kweseshini yokukhangela, ungacofa kwi “Imfihlo & Umgaqo-nkqubo weKuki” tab on your screen. This will display the consent notice again enabling you to change your preferences or withdraw your consent entirely.